यात्रुका आफन्त सोधपुछ गर्न पोखरा विमानस्थलमा
तारा एअरको जहाज खोज्न सेना र प्रहरी परिचालन
तारा एअरको जहाज खोजीमा गएको हेलिकोप्टर जोमसोम फर्कियो
‘पिकासोले भन्नुभयो- मलाई त अटोग्राफ दिन नै आउँदैन’
पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एअरको जहाज सम्पर्कविहीन
बजेट अपराह्न ४ बजे सार्वजनिक हुँदै, आयकरको सीमा बढ्ने
कहाँ जान्छ ब्यांकबाट प्रवाह हुने कर्जा?
गुराँस खाने कि नखाने?
आठ महीनामा ३२५ किमी सडक मात्रै कालोपत्रे, पुल निर्माणको गति सुस्त
९४ प्रतिशत नेपालीको घरमा बिजुली
कहाँ जान्छ ब्यांकबाट प्रवाह हुने कर्जा? ब्याङ्किङ प्रणालीबाट प्रवाह भएको कर्जा आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाभन्दा आयातमा बढी उपयोग हुन पुग्दा कर्जा विस्तारबाट देशले बृहत्तर फाइदा लिन सकेको छैन।
किन बरालियो अर्थतन्त्र? देशको समृद्धिका लागि कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमध्ये कुनै एउटाको नेतृत्वमा अर्थतन्त्रको गन्तव्य तय गरिनुपर्छ।
‘पिकासोले भन्नुभयो- मलाई त अटोग्राफ दिन नै आउँदैन’ “महेन्द्र सरकार प्रदर्शनीमा आउनुभएपछि उहाँले ‘तिम्रो पेन्टिङमा मैले गौतम बुद्धको पहेंलो र पशुपतिनाथको रातो देखें’ भन्नुभयो। त्यो शब्द बीपीबाटै प्रेरित भएर भन्नुभएको हो कि जस्तो लाग्छ।”
‘काठमाडौंमा मोनोरेल सम्भव छैन, विद्युतीय गाडीमा लगानी गर्छौं’ हामी कार्यपालिका बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण नै गर्नेछौं। जनताको पक्षमा काम गर्न कसले नमान्नुहोला र?
आयात नियन्त्रण समाधान होइन नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि उज्यालो पारिदिंदैन न त अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सघाउँछ।
बलियो अर्थतन्त्रको जग: सामाजिक सुरक्षा धेरै विकसित मुलुककै हाराहारी हाम्रो जनसङ्ख्या वृद्धिदर प्रतिस्थापन दरभन्दा मुनि पुगिसकेको छ। हामी धनी हुनु अगावै बूढो देश हुने बाटोमा छौं। यस्तै भइरहे केही वर्षमै काम गर्ने र आर्थिक उपार्जन गर्ने वर्गको सङ्ख्या स्वात्तै घट्नेछ।
विदेशी औषधि कम्पनीको नेपालमा दर्ता किन आवश्यक? विदेशी औषधि कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता नभएकै कारण सरकारले ठूलो परिमाणमा कर त गुमाइरहेकै छ, तिनका उत्पादनका कारण स्थानीयले क्षति बेहोर्नुपरे जवाफदेह बनाउने संयन्त्र समेत छैन।
कसरी टार्ने अर्थतन्त्रको आपत्? श्रीलंकाको भोगाइबाट पाठ सिक्दै रूस-युक्रेन युद्ध जस्ता बाह्य अवरोधलाई पनि ध्यान दिएर विभिन्न क्षेत्रगत नीति एकसाथ अपनाउनुपर्छ।
कांग्रेसको भोटमा माओवादीको रजाइँ गठबन्धनको सहयोग विना जितेका पालिका प्रमुख र अध्यक्षको सङ्ख्या जोड्दा चौथो स्थानको जनता समाजवादी पार्टीले भन्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले करीब एक दर्जन पालिका प्रमुख मात्रै बढी जितेको देखिन्छ।
परनिर्भरताकाे अन्त्य बढ्दो व्यापार घाटाबाट मुक्ति पाउन अर्थतन्त्रको आन्तरिक उत्पादन दह्रिलो बनाई वस्तु र सेवा दुवैमा रहेको वैदेशिक निर्भरता अन्त्य गरिनुपर्छ।
सङ्कटको सङ्केत अब पनि सुझबुझ नदेखाउने हो भने अर्थतन्त्र थप जटिल मोडमा पुगी राजस्व कम भई कर्मचारीले तलबै खान नसक्ने स्थिति आउन सक्छ।
मतदाताको रुचि दल होइन, व्यक्ति बालेनहरूले चुनावमा बढी मत पाउनुलाई संयोगका रूपमा बुझ्नु चुनाव मार्फत देशको राजनीतिक स्वास्थ्य जाँच्ने परिपाटी अस्वीकार गर्नु हो।
आयात नियन्त्रणको विकल्प छैन स्थिति यति भयावह छ कि महामारीले आयात नरोकेको भए दुई वर्षअघि नै आजको अवस्था आइसकेको हुन्थ्यो। त्यसैले पनि तत्कालका लागि आयात नियन्त्रणको विकल्प छैन।
स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको लगानी‚ फाइदा कि बेफाइदा? एकथरी मानिस निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र विस्तार भई सेवाको पहुँचमा व्यापकता आएको तर्क प्रस्तुत गर्छन्। अर्काथरि‚ स्वास्थ्य सेवा महँगो भएर आम मानिसको पहुँचबाहिर पुग्न थालेको तर्क प्रस्तुत गर्छन्।
‘दिलीपका परिवार र हामीलाई अझै ज्यानको धम्की आइरहेको छ’ ‘हामी अहिले पनि जोखिममा छौं। पैसा र शक्ति भएपछि जे पनि हुन्छ भन्ने छ। जस्तोसुकै जोखिम मोल्नुपरे पनि न्यायका लागि लड्छौं।’
दिल्ली र बेइजिङ रिसाउलान् भनेर कहिलेसम्म डराउने? नेपालले भौगोलिक सुरक्षा, अनुदानमूलक वैदेशिक लगानी र दीर्घकालीन लाभको विश्लेषण गरी कुनै एक छिमेकीको विश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनको समर्थन जुटाउन आवश्यक छ।
रूस-युक्रेन युद्ध: मिडियाको दुष्प्रचार लडाइँ रूस-युक्रेन युद्धबारे पूर्वाग्रह प्रेरित सूचना-युद्धले मिडियाको विश्वसनीयता र गरिमामै धब्बा लगाएको छ।
सात दशकमा कहाँ चुक्यो नेपाली कलायात्रा? अमूर्तशैलीलाई अघिल्लो वादसँग जोडेर बिस्तारै परिवर्तन गर्नु पर्थ्यो‚ तर त्यसो नगरी विदेशमा प्रचलित वादको अन्धानुकरण गरियो। हामी त्यहीं चुक्यौं।
‘खुलापन नेपालको सम्पत्ति हो, बाङ्लादेशमा त बोल्दा पनि गायब पारिन्छ’ ‘यूरोपमा खुला सीमा छ, एउटा देशको नागरिक अर्को देशमा विना रोकतोक जान–आउन सक्छ। दक्षिणएशिया पनि सीमारहित बनाउनुपर्छ।’
इँजार, भोजन र सिसा कमरेड विप्लवको पार्टी लगभग टुटफुटको सँघारमा पुगेको थाहा पाएर एक जना दुःखी प्रेमी आत्माले आफैंलाई सम्झायो, “ए मेरो कमजोर दिल, अब आफूलाई धेरै नदुखा। तँभन्दा बढ्ता त कम्निष्टका पार्टी टुट्दार’छन्।”
प्रश्न हराउँदै गएको पत्रकारिता हामीकहाँ पत्रकारले राजनीतिक दलको प्रतिनिधि बन्दा वा चुनावै लड्दा पनि पत्रकारिता छोड्दैन। अनि उही स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिताबारे धाराप्रवाह प्रवचन दिइरहेको हुन्छ। हामी तिनलाई किन प्रश्न गर्दैनौं?
हामी भेडा होइनौं लोकतन्त्रको तर मात्र खान पल्केका ढाडे बिरालाहरूलाई साँचो सुम्पन नचाहँदैमा कोही मानिस भेडा हुँदैन।
मोदीको लुम्बिनी भ्रमणमा छताछुल्ल प्रधानमन्त्री सचिवालयको कमजोरी लुम्बिनीमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको स्वागतका लागि अघिल्लै दिन भैरहवा पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयका सदस्यहरूले तयारी र व्यवस्थापन गर्नै सकेनन्।
नेपालीहरू काम होइन, गफ, जुलूस र आन्दोलन गर्नमा धनी छौं मुलुकको सुस्ताएको अर्थतन्त्र उकास्न संस्थागत पहल, नीतिगत व्यवस्थासँगै समाजको प्रवृत्तिगत समस्या सुधारको अस्त्र नसमाती सुखै छैन।
‘मतगणना धेरै बाँकी छ, ठोकुवा गरेर जित मेरै हो भन्दिनँ’ ‘मेरो हार होस् वा जित, समाजका लागि काम गर्न छोड्नेछैन। समाज, देश बनाउन कसैले केही न केही त गर्नैपर्छ।’
लुम्बिनीमा सम्राट् अशोक बन्न नसकेका मोदी बौद्ध धर्मको बढ्दो लोकप्रियता रोक्न नसकेपछि त्यसैलाई हिन्दूत्वको खास्टो ओढाई नेपाल र भारत दुवैलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने राजनीतिक चालबाजी हो, मोदीको लुम्बिनी भ्रमण।
किन बल्दो छ श्रीलंका? सरकारहरू अर्थ-राजनीतिका कमजोरी हटाउनु साटो अपारदर्शी तरीकाले मौद्रिक र वित्तीय व्यवस्थापनतिर लाग्दा श्रीलंका आज वैदेशिक ऋणको दलदलमा फसेको छ।
स्थानीय चुनावको सन्देशः प्रतिगामी ‘वैकल्पिक शक्ति’ लाई झापड स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामले वैकल्पिक विचार र शक्तिको दाबी गर्दै परिवर्तित व्यवस्था विपरीत बगिरहेको विवेकशील साझा जस्ता दललाई हैसियत चिनाइदिएको छ।
अर्थतन्त्र सुधार गर गठबन्धन सरकार मुलुकको राजनीतिक स्थिरताभन्दा सरकारमा सहभागी दलहरूको अनुचित स्वार्थपूर्तिमा उद्यत छ, जसको घानमा जनता परिरहेका छन्।
यात्रुका आफन्त सोधपुछ गर्न पोखरा विमानस्थलमा सम्पर्कविहीन तारा एअरको जहाजमा रहेका यात्रुका आफन्त सोधपुछ गर्न पोखरा विमानस्थलमा पुगेका छन्।
तारा एअरको जहाज खोज्न सेना र प्रहरी परिचालन प्रतिकूल मौसमका कारण हवाईमार्गबाट तारा एअरको जहाजको खोजी कार्य प्रभावित भएपछि स्थलमार्गबाट सेना र प्रहरी परिचालन गरिएको छ।
तारा एअरको जहाज खोजीमा गएको हेलिकोप्टर जोमसोम फर्कियो सम्पर्कविहीन तारा एअरको जहाज खोजीका लागि गएको फिसटेल एअरको हेलिकोप्टर खराब मौसमका कारण जोमसोम फर्किएको छ।
ब्याङ्किङ प्रणालीबाट प्रवाह भएको कर्जा आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाभन्दा आयातमा बढी उपयोग हुन पुग्दा कर्जा विस्तारबाट देशले बृहत्तर फाइदा लिन सकेको छैन।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आज सार्वजनिक गर्दै छ। अपराह्न ४ बजे बस्ने संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय-व्यय विवरण प्रस्तुत गर्नेछन्।
आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक, प्रति व्यक्ति औसत आय एक लाख ६४ हजार
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ सार्वजनिक गरेको छ।